> Resource > Lugood > Sidee soo celinta Lugood Library ka iPhone
"Sidee ayaan ka iPhone soo celin maktabadda Lugood ii? Anigu ma soo celin karo Lugood Library waxaan dhumiyay files gurmad. Music All my waxaa ku xayiran galay iPhone. Suuragal u tahay in la soo celiyo Lugood Library ka iPhone? Ma doonayo in khatarta ay lumiyaan wax walba, gaar ahaan heesaha. Fadlan caawin !!! "
Mararka qaarkood marka soo food saartay xaalad nasiib darro, computer ayaa la xaday ama burburay, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay user ee kor ku xusan, iyo sidoo kale laga badiyay faylasha gurmad. Xaaladdan oo kale, haddii aanad synced aad iPhone aad cusub madhan Lugood Library iyo wax walba waxaa, aad u soo celin kartaa Lugood Library ka iPhone. Hoos waxaan sheegi doonaa sida loo soo celin Lugood ka iPhone.
Soo Celinta files Media in aan iibsaday on Lugood Store. Haddii aad iPhone ku jira heeso aad wada dooxay ka CD ama goolka ilaha kale, inaad isku daydaa inaad ka app dhinac saddexaad inaan marka hore la soo celiyo ka iPhone. Halkan waxaan ku talinaynaa in aad TunesGo, app xirfadle si ay u gudbiyaan music, videos, sawiro, iwm ka iPhone in Lugood Library.
TunesGo maxkamad version soo bixi!
Fiiro gaar ah: Labada TunesGo (Windows) iyo TunesGo (Mac) ayaa laga heli karaa. Hadda version Windows waxay ka caawisaa si toos ah loo soo celiyo Lugood Library music, videos, iyo playlists ka iPhone. Oo waa inaad xitaa dhoofin karo iPhone xiriirada, fariin qoraal ah, sawiro iyo in computer. Version Mac hadda taageerada dib u soo celinta music si toos ah uga iPhone iyo videos iyo sawiro wareejinta ka iPhone in computer.
Just rakibi TunesGo> Connect iPhone la computer> si toos ah u gudbiyaan files warbaahinta ka iPhone in Lugood Library / computer.
Soo Celinta Lugood iibsadaan. Music, bandhigyada TV, Movies, barnaamijyadooda, buugaag, iwm aad iibsatay ka Lugood lagu soo celin karaa in Lugood Library. Si aad u soo celin Lugood Library iibsadaan ka iPhone, abuurtaan Lugood> xirmaan iPhone la Lugood> xaq-riix si aad iPhone hoos Qalabka si ay u doortaan "Iibsasho Transfer". Haddii aad iPhone kuma jiraan Lugood oo dhan iibsaday alaabta, waxaad soo celin karo iibsadaan ka xisaabtaada oo ag maraya in itune Edit Menu> rabtid ...> hubiyo Download pre-amar marka la heli karo.
Si looga hortago goobaha aad iPhone laga tirtirayaa by Lugood mustaqbalka, marka ka iPhone soo celinta Lugood Library, waa in aad la sameeyo gurmad ah. Connect aad iPhone la Lugood> xaq-riix si aad iPhone iyo dooran Back Up hoos Devices.
Best Manager File Desktop macruufka in Maamul macruufka Files